Uber in Talks to Sell Its Food-Delivery Business in India | Myanmar Business Today
Home Business Regional Uber in Talks to Sell Its Food-Delivery Business in India
Uber is in advanced discussions to sell its food-delivery business in India, according to two people with knowledge of the plans, as the company moves to stem its losses.
The ride-hailing company is nearingadeal to sell its Uber Eats service in India to Zomato, an Indian food-delivery service, said the people, who spoke on the condition of anonymity because they were not authorized to do so publicly.
A spokesman for Uber declined to comment. The talks were reported earlier by TechCrunch, which saidadeal would value the India business of Uber Eats at $400 million.
In India particularly, Uber Eats has struggled to sign up restaurants, diners and delivery agents inabrutally competitive market where Zomato and other delivery startups like Swiggy are well established. Uber has had to offer heavy incentives to lure customers there.
In September, Uber also announced that it was pulling its Eats business out of South Korea, where the company faced stiff competition from local startups.
Uber သည် အိန္ဒိယရှိ ယင်း၏ အစားအသောက် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို ရောင်းချရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း အဆိုပါ လုပ်ငန်းရောင်းချရေးအစီအစဥ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးသော သတင်းရင်းမြစ်များအရ သိရသည်။
တက္ကဆီအငှားကား ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သော Uber သည် အိန္ဒိယတွင် လည်ပတ်နေသည့် ကုမ္ပဏီ၏ Uber Eats အစားအသောက် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို အိန္ဒိယ ဒေသခံ အစားအသောက် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း Zomato ထံ ရောင်းချရန် နီးစပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသော သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။
Uber ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Uber Eats ကို ရောင်းချရန် စီစဥ်နေသည်ဆုိသည့် သတင်းကို TechCrunch က စတင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ဖြင့် ရောင်းချနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
Uber ၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Dara Khosrowshahi အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အမြတ်အစွန်းရရှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်ကို သက်သေပြရန်အတွက် အရှုံးပေါ်နေသော လုပ်ငန်းများကို ထုတ်ပစ်ရန် ကြိုးစားနေသည်။
အချို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကတော့ Uber အနေဖြင့် ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် ကားအငှားဝန်ဆောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Careem ကို ဝယ်ယူသည်မှာ ‌ကုန်ကျစရိတ်များလွန်းသည်ဟု ‌ပြောနေကြသည်။ Uber အနေဖြင့် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီအား အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ဒသမ၁ ဘီလီယံဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဟု ကြေညာထားသည်။
Uber Eats မှာ ကုမ္ပဏီ ဝင်ငွေတိုးတက်ရန်အတွက် အလားအလာရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်လာသော်လည်း ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အသုံးပြုသူအသစ်များရရှိရေးအတွက် အထောက်အပံ့များ၊ ပရိုမိုးရှင်းများ အများအပြားပေးခဲ့ရသည်။ Uber Eats အတွက် သူ၏ အစီအစဥ်မှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် မြို့တိုင်းတွင် ပထမနေရာ၊ ဒုတိယနေရာရအောင် ရည်မှန်းထားကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် conference call ဖြင့် စကားပြောရာတွင် Khosrowshahi က ရှင်းပြသည်။
“အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲဒီအဆင့်အထိ ရောက်အောင် မလုပ်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လုပ်ငန်းကို ထုတ်မယ်၊ သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ထဲက ထွက်မယ်” ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်တော့ Uber Eats သည် Zomatoနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ အခြေတည်ပြီးသားဖြစ်သည့် ယှဥ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်သော ဈေးကွက်အတွင်းတွင် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ပို့ဆောင်ရေးအေးဂျင့်များ ကုမ္ပဏီကွန်ရက်အတွင်းဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲကြုံနေရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဖောက်သည်များရရှိရန်အတွက် မက်လုံးပေးသည့်အနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းများ အကြီးအကျယ်ပေးခဲ့သည်။
SOURCEMike Isaac and Katie Benner (New York Times)
Previous articleJapan Stocks Edge Lower on Profit Booking After Trade Deal Rally
Next articleU.S. Gains From China Deal Come ataCost